Nkọwa akụrụngwa sitere na akụrụngwa ruo n'ichepụta ahụ, ntụgharị akpaka mpempe akwụkwọ, banding ntị akpaka, mpịachi ime n'ime ntị nke eriri ntị na n'ikpeazụ ngwaahịa a na-akpachapụrụ anya. A na-etinye ihe nkpuchi ahụ, na-apịaji, gbanye ya ma bee n'otu oge. Ihe...
Isi ihe dị iche iche nke igwe nkpuchi bụ: iji usoro nchịkwa nke ịkpụ, iji bọtịnụ dị mfe, nke ahaziri iche nke ebumnuche. Ọ nwere ike ịmepụta 1 ruo 4 n'ígwé nke masks ọkọlọtọ n'otu oge na-agba ọsọ ngwa ngwa; teknụzụ zuru ụwa ọnụ na-edozi ọdịnala ...
1.Automatic cup-shaped mask forming machine mmeghe Igwe nkpuchi bụ ime ụdị ihe mkpuchi dị iche iche na ụfọdụ arụmọrụ filtration site na ịpị ọkụ, ultrasonic ịgbado ọkụ na mkpofu mkpofu. Igwe nkpuchi abụghị otu igwe, ọ chọrọ ọtụtụ igwe iji ...
Kemgbe ntiwapụ nke ọrịa oyi baa ọhụrụ, enweela ụkọ ihe mkpuchi na mba na ụwa niile, na "enweghị ike ịzụta ihe mkpuchi" aghọwo ihe na-ekpo ọkụ. Kedu ka obere ihe mkpuchi ga-esi kwụsị nje virus ahụ dị egwu? Taa, anyị ga-edozi mmepụta ihe mkpuchi eq ...
Enwere ike iwepụ ihe mkpuchi na 2021?
Anyị niile maara na n'oge ọrịa na-efe efe, masks bụ ihe nchebe dị mkpa maka onye ọ bụla, gbakwunyere ọrịa na-efe efe ugboro ugboro na-eme ka ndị mmadụ chee na ọrịa ahụ ga-esi ike ịkwụsị na 2021. Ya mere, ị nwere ike wepụ ihe mkpuchi gị na 2022, ma ị chọrọ ịkwakọba ihe mkpuchi maka Spri ...
Igwe nkpuchi akpaaka ihe ọmụma na-arụkwa ọrụ mgbe niile
Igwe ihe nkpuchi, dị ka aha ahụ pụtara, bụ akụrụngwa maka imepụta ihe mkpuchi. Enwere igwe ihe mkpuchi ugbu a n'ahịa: igwe ihe mkpuchi ewepụghị, igwe ihe mkpuchi iko, igwe mkpuchi ọnụ ọbọgwụ, igwe mpịaji, igwe mkpuchi akpaka na ihe ndị ọzọ. Ndị zụrụ akpaka flat m ...
Okwu mmalite nke nhazi dị mfe nke igwe mkpuchi akpaaka
Enwere ọtụtụ ụdị igwe ihe mkpuchi akpaka, dị ka mmepụta nke ihe mkpuchi dị iche iche, a na-ekewa n'ime igwe mkpuchi akpaaka, ntị n'ime ya na igwe ihe mkpuchi, igwe ihe mkpuchi akpaaka, igwe mkpuchi akpaaka duckbill, mkpuchi mkpuchi akpaka ...
Kedu ka esi ehichapụ igwe mkpuchi azụ azụ akpaka?
Kedu ka esi ehichapụ igwe mkpuchi azụ azụ akpaka? Nke a bụ nsogbu nke ọtụtụ ndị na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-azụrụ ihe mkpuchi azụ azụ akpaka, ọtụtụ ndị na-arụ ọrụ igwe amaghị nkà na ụzụ na ha amaghị ka e si ewepụ ngwa ahụ. Yabụ, ka esi d...
Ịrụ ọrụ oge niile nke igwe nkpuchi ntị nwere ike ịtụfu
Akpaaka n'ime ntị ewepụghị ihe mkpuchi ịgbado ọkụ ntị gbalaga igwe mejupụtara ihe n'ime ntị band ịgbado ọkụ igwe na a ebu, nke nwere ọrụ nke n'ime ntị band ịgbado ọkụ, hem ịgbado ọkụ, hem ịcha na nkpuchi mmepụta nke masks, na-aghọta akpaka mmepụta nke n'ime ntị band wel. ...
Igwe nkpuchi N95 ọdịda na ngwọta nkịtị
Igwe nkpuchi N95 akpaaka bụ ahịrị mmepụta ihe nkpuchi ọhụrụ dị mgbagwoju anya, anyị na-enwekarị nsogbu na usoro iji ya, nke mbụ, anyị kwesịrị ịghọta nke ọma ihe mmejọ ga-adịkarị na igwe mkpuchi N95, enwere ike idozi mmejọ ndị a ngwa ngwa. a...
Kedu ihe kpatara igwe mkpuchi ewepụghị ji bụrụ ihe na-ere ọkụ na-ekpo ọkụ na akụrụngwa nkpuchi?
O doro anya na ndị na-emepụta ihe nkpuchi na ndị na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-emepụta ihe mkpuchi dị larịị bụ igwe na-akpaghị aka maka ịmepụta ihe mkpuchi dị larịị. Ọ nwere ike na-akpaghị aka site na mmepụta nke isi ihe mkpuchi ahụ ruo na ịgbado ọkụ nke eriri ntị, waya imi na ...